iMovie update on Mac
3.2 iMovie ka iTunes Library 2
Ọ bụ-ahụ kwuru na iMovie nakwa dị ka Mac nwere mmekọrịta chiri anya dị ka arụmọrụ nke iMovie adabere ya echichi na nke kacha mma e nwere ike nyere onye ọrụ mgbe usoro ihe omume e arụnyere na Mac. Ọ na-na--ahụ kwuru na onye ọrụ na nke a kwesịkwara ime ka n'aka na ndị kasị mma na ọkaibe usoro na nke a bụ onye ahụ nke nwere ga-agbaso eburu n'uche n'ozuzu ike nke os. A nkuzi e dere iji jide n'aka na ndị ọrụ na-a doro anya na foto nke iMovie na ya ịrụ ọrụ karịrị Mac iji jide n'aka na ihe kasị mma pụta na-eme.
Apple iMovie na e ji mara ya
E nwere ọtụtụ iri puku ndị ọrụ na-eji usoro ihe omume iji jide n'aka na kasị mma na ndị ọkaibe mmemme na-nyere ka usoro nakwa dị ka video edezi na-eme na ihe kasị mma n'ụzọ. Ọ na-na--ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịkwara ime ka n'aka na iMovie ebudatara si ukara website iji jide n'aka na otú onye ọrụ nwere ike inwe ndị kasị mma na ọkaibe omume na-ibudatara na onye ọrụ ọkọkpọhi nsonaazụ kacha mma nakwa . Ọ na-na--ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịkwara ime ka n'aka na nke kacha mma e nyere ka usoro ma ọ bụrụ na otu e ebudatara ka kwuru. Iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi nsonaazụ kacha mma ọ na-gwara iji jide n'aka na kasị mma na ndị ọkaibe Filiks na a ga-kọwara na akụkụ ikpeazụ nke isiokwu na-sokwaara iji jide n'aka na onye ọrụ na-akawanye arụpụta ihe kasị mma na mkpokọta mbipụta na-metụtara iMovie update na-kpebiri ozugbo o kwere omume.
5 Atụmatụ maka iMovie update
Iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe N'ihi na nke a n'okpuru bụ n'elu 5 iMovie update Atụmatụ na ga-eme ka n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma Nchikota iMovie nakwa dị ka Mac na nke a. Ndị a Atụmatụ bụ n'ozuzu na ọdịdị na ike ga-etinyere na mfe n'ụzọ iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe N'ihi na ikwu na onye a na-rụrụ. Ọ ga-ekwe ka ndị ọrụ na-eme ka n'aka na n'ozuzu ike echiche na-site na-akwanyere iMovie.
1. Olee imelite iMovie on Mac
Ọ bụ a maara nke ọma eziokwu na iMovie bụ ihe iLife dabeere na ngwa ma maka otu ihe ahụ ọ bụ otu n'ime ndị kasị mma na ala nke nkà ọrụ ndị a ga-eme iji jide n'aka na iMovie a na-emelite enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu. Ọ na-na--ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na Mac mmelite na-nyeere dị ka ọ ga imelite iLife dabere na ngwa na-akpaghị aka gụnyere iMovie na ọ bụ mfe ụzọ nke na-eme otú ahụ:
2. iMovie bụghị importing nkiri mgbe update
The ngwọta na nke a bụkwa mfe ma onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na ndị na-esonụ nzọụkwụ abụọ na-soro na-eme ka n'aka na needful na mere ịke:
a. Onye ọrụ kwesịrị iji jide n'aka na njehie na-eche ihu na-agụ n'ụzọ kwesịrị ekwesị iji jide n'aka na ihe ngwọta etinyere dị na akara na ihe ndị a chọrọ:
b. Onye ọrụ nwere ike ugbu a na eziga nkiri ka iTunes ma ọ bụ IOS ngwa n'ihi na iMovie iji jide n'aka na kasị mma na ndị ọkaibe usoro a soro. Importing nkiri si iTunes ga-edozi ihe iseokwu na zuru:
3. Olee otú Wepụ Old Libraries mgbe Imelite ka iMovie?
Usoro dị mfe na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na ndị na-esonụ na-soro mere na ihe ga-esi dị na akara na chọrọ nke onye ọrụ na nke kacha mma pụta na-site na nke a:
a. Ozugbo iMovie arụnyere na ọ bụ-ahụ kwuru na ọrụ na onye ga-enwe ike ịhụ niile ihe na ekpe kọlụm nke usoro ihe omume na-eme ka n'aka na ha na-ndokwa ma hazie n'ebe ahụ dị ka ndị iMovie ga-maa mbubata ha na-akpaghị aka:
b. Onye ọrụ nwere ike mgbe ahụ nanị nri pịa ihe omume na ike zigara ya n'ebemkpofuozi na nke a kwa completes usoro na zuru:
4. Olee otú iji nweta elu ngwaọrụ mgbe update
Site na ndabara onye ọrụ ga-enwe ike ịhụ elu ngwá ọrụ mmanya mgbe update e mere na ọ bụ ihe niile n'ihi na eziokwu na ndị ọhụrụ interface nke usoro ihe omume e mere mfe site Apple na ha chọrọ ya aka ịnọgide na otú ahụ. Iji jide n'aka na ihe kasị mma na ọkaibe usoro a soro na nke a nzọụkwụ ndị dị ka ndị na-arụpụta ihe kasị mma na nke a:
Onye ọrụ kwesịrị iji jide n'aka na ụzọ iMovie> Mmasị na-soro na onye ọrụ wee na-atụ na nke a:
N'okpuru izugbe taabụ onye ọrụ nwere ike ịlele nhọrọ "show tupu Ngwaọrụ" a ga-eme ka n'aka na elu toolbar-egosi ka anya dị ka iMovie na ulo oru oge ọzọ na a na-eme usoro zuru ezu na zuru:
5. Olee otú iji nnukwu font maka omume ndepụta mgbe mmelite iMovie
Iji jide n'aka na ihe kasị mma na ọkaibe usoro a soro na nke a na ọ bụ-ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na ndị na-esonụ usoro a soro na-arụpụta ihe kasị mma:
a. Ụzọ na-a ga-agbaso na nke a bụ iMovie> mmasị
b. N'okpuru nchọgharị taabụ onye ọrụ nwere ike ijide n'aka na igbe dị ka e gosiri na ọnụ ọgụgụ n'okpuru na-enyocha ma na nke a kwa okokụre usoro na zuru na mma mmasị nke onye ọrụ na nke a:
> Resource> iMovie> 5 Atụmatụ maka iMovie update on Mac